एउटा सिक्काको मूल्य २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ! आखिर के थियो त्यो सिक्काको विशेषता ? – Khabar 27 Media
June 11, 2021 October 15, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on एउटा सिक्काको मूल्य २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ! आखिर के थियो त्यो सिक्काको विशेषता ?
एउटा सिक्काको मूल्य कति पर्ला ? सामान्यतया सिक्काको मूल्य त्यही सिक्कामै लेखिएको हुन्छ । अमेरिकामा यस्तै एउटा सिक्का अहिले चर्चामा छ । यो सिक्का २० डलरको सिक्का हो अर्थात यसमा लेखिएको मूल्य २० डलर अर्थात २ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्रै हो । तर, त्यो सिक्का १८.९ मिलियन डलर अर्थात २ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । हेर्दा सामान्य देखिले यो सिक्काको लिलामी भएको थियो जसमा यो सिक्का यति महंगो मूल्यमा बिक्री भएको हो । सोही लिलामीमा एउटा अत्यन्तै दुर्लभ हुलाक टिकट पनि ८.३ मिलियन डलरमा बिक्री भएको छ ।
भुटेको लसुन दैनिक खानाले शरीरलाई हुन्छ यस्ता आश्चार्य चकित फाइदाहरु ! पढ्नुहाेस्
February 9, 2021 Shyam Lama
घरमा झुक्क्एिर पनि नराख्नुहोस् यस्ता तस्बिरहरु
July 31, 2021 July 31, 2021 Shyam Lama
यस्तो हुदा पनि आफ्नो बाबुको साथ छोडिन् यी महान छोरीले ४७ बर्षिय बुवाको दिसापिसाब यसरि स्याहार गर्दै (भिडियोसहित)